Ihu Ọhụrụ nke Nchọgharị Nchọgharị Nchọgharị | Martech Zone
Wednesday, December 5, 2012 Tọzdee, Disemba 4, 2012 Douglas Karr
Ndị na-agụ blọgụ anyị maara na anyị buru ibu ndị na-akatọ njikarịcha njin ọchụchọ karịrị afọ gara aga. Fuzz Otu etinyewo ihe omuma a di egwu, Ihu ohuru nke SEO: Otu SEO Si Gbanwee, nke ahụ na-akụda usoro ọ bụla nke oge ochie, ma jiri ya tụnyere atụmatụ ọhụrụ.
N'ime ọnwa 18 gara aga, usoro SEO yana usoro SEO agbanweela nke ukwuu. Ọ bụ ezie na SEO ka gbanyere mkpọrọgwụ dị ka ịdọ aka ná ntị teknụzụ, ọkwa dị ịrịba ama nke SEO na-aga n'ihu na-eche echiche banyere okike na ịzụ ahịa nke na-emetụ akwara ụmụ mmadụ ma ọ bụ ndị na-ege ntị na engines ọchụchọ na-akawanye mma na nghọta. SEOs na-amalite iche echiche banyere ndị na-ege ha ntị na mbụ na-etinye ọdịnaya tupu njikarịcha maka engines ọchụchọ.
Biko wepụta oge iji gụọ akwụkwọ ozi a ma jiri ya tụnyere atụmatụ gị ugbu a. Ọ bụrụ n ’ị nwere ụlọ ọrụ SEO ma ọ bụ onye ndụmọdụ nke na-agbanye usoro ochie, ị nwere ike chọọ ịtụgharị mmekọrịta gị.
Tags: content Marketingnjikọ-ụlọnjikarịcha ọchụchọsearch engine njikarịchausoro nyocha njikarịcha search engineChọọ MarketingAatụmatụ aghụghọazum
Kunle Campbell - Fuzz Otu
Dee 5, 2012 na 9: 38 AM
Ọtụtụ ekele maka aha Douglas - anyị na-etinye ya ọnụ dị ka ụzọ isi kụziere ndị ahịa anyị etu SEO siri sie ike dị ka usoro si bụrụ na etu o si jiri ọwa ndị ọzọ na ahịa dijitalụ kpuchie ya.
Chọrọ otu na usoro mmekọrịta mmekọrịta iji nwee ihe ịga nke ọma na weebụ.
Dee 5, 2012 na 10: 32 AM
Nke a bá »really n'ezie na-enye aka… M na-agá» a a otutu SEO blá »gá» about banyere á »há» SEO rá »SEO SEO SEO Filiks na si atá» but matá »well nke a bá» presented ihe kasá »‹ mma-adade na kasá »‹ aghá »ta blog post mgbe ..
Dec 9, 2012 na 11:29 PM
Nnukwu ihe omuma, nyere aka nke oma, karisia ndi na-arịọ arịrịọ na ahia ahia ma na ahuta otutu ndi mmadu ka ha na akuzi uzo SEO.
Dee 18, 2012 na 8: 52 AM
Ihe omuma ihe kwesiri onye obula ma obu onye okacha amara, n'ihi na o jiri uzo SEO mee ihe dika uzo di mfe ma di nkpa. Okpokoro ahụ ga-eme ka anyị mata ma ihe anyị kwesịrị ịme ma anyị ekwesịghị ime. Ntụle dị mfe ma dị nkenke na-eme ka m tụleghachi ihe m maara banyere SEO yana otu ụzọ ochie si baa uru ugbu a. A gbanwere omume ọma ahụ, yabụ m ga-agbanwe usoro ịzụ ahịa m maka saịtị m $ earch. Ọ bụrụ na ndị ahịa na ụlọ ọrụ anaghị enwe ike ịhazigharị, ha na-efunahụ asọmpi ahụ. Mana ugbua asọmpi ahụ abụghị maka ị nweta “saịtị gị ka ọ pụta n’elu isi ihe nchọta ọchụchọ maka isi okwu ma ọ bụ ahịrịokwu” mana maka imepụta “ọdịnaya kacha mma nke ga-egbo mkpa ndị na - agụ ya”.
Feb 26, 2013 n’elekere 1:30 nke abali
Hey Douglas, nke a bụ otu n'ime ezigbo ihe ọmụma. Agụrụ m ọtụtụ ihe dị iche iche maka mmelite ọhụụ ọhụrụ, mana enwere m mmasị na nke a, n'ihi na site na infographic a, amam nfe ịmata ihe dị iche na mmelite ọhụrụ na ọhụrụ. Daalụ Douglas maka ịkekọrịta nnukwu infographic a.
Feb 26, 2013 n’elekere 2:09 nke abali
Egwu! Ihe omuma ihe omuma a di ka ihe di ike iji mara ihu ohuru nke SEO. Douglas, ị gosipụtarala ezigbo izizi na isi mmalite a. Ọ dị ezigbo egwu.
Sep 5, 2013 na 1: 16 AM
Hey Douglas, Ezigbo ihe omuma. ọtụtụ mmadụ nwere ike Nwelite usoro ọhụụ mana nke a dị mfe ma dị mma karịa nke ọzọ.
IOS APP Mmepe
Dee 17, 2013 na 6: 26 AM
kedu ezigbo ọdịnaya dị ịtụnanya nke a bụ ihe ịtụnanya magburu onwe ya nke ukwuu maka ekele nkekọrịta
Ezigbo ihe omuma, ihe oyiyi …………
Jul 13, 2016 na 2: 06 AM
SEO gbanwere n'ezie ugbu a. Have ga-agbanwe usoro gị iji bulie saịtị gị na injin nchọta dị iche iche yana ụwa nke oge a, saịtị mgbasa ozi mmekọrịta dị ezigbo mkpa maka saịtị gị. Atụmatụ ndị a dị oke mma. Daalụ maka ndụmọdụ dị mma na nke bara uru.